यस्तो छ भित्रि रहस्य, तालिबानले सत्ता कब्जा गरिरहँदा किन मौन रह्यो अफगान सेना ?
नेपाल अन्लाईन पत्रिका – काठमाडौं। १५ अगस्टमा जब तालिबानी विद्रोही अफगानिस्तानको राजधानी काबुल छिर्न थाले, राष्ट्रपति असरफ घानीले देश नै छाडेर भागे । केही रिपोर्टका अनुसार उनी ताजिकिस्तान पुगे भनिएको छ । कसैले उज्वेकिस्तान पुगेको दावी गरेका छन् । **यो समाचारको भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नु **
अर्को कारण थियो कि, जब अमेरिकी जो बाइडेन सरकारले अमेरिकी सेनालाई फिर्ता लैजान थाल्यो, यो त अफगान सेनाका लागि झनै हिनताबोध गराउने लज्जास्पद घटना थियो । अफगान सेनालाई लाग्यो कि, अब तालिबानसँग कसरी भीडन्त गर्न सकिएला र ? खासमा तालिबानसँग लड्नुपर्ने बेलामा अमेरिकी सेना फिर्ता गइदिँदा अफगान सेना थप चिढिएको थियो । त्यसो त, त्यसअघि नै राष्ट्रपति घानी अमेरिका पुगेर सेना फिर्ताको निर्णय गरेका थिए । जवकि, त्यस निर्णयको विरोध सेना सहित धेरैले गरेका थिए ।
यदी ९/११ का दुश्मनविरुद्ध मात्रै यो मिसन थियो भने २०११ म ओसामा बिन लादेनको हत्यापछि पनि अमेरिका किन अफगानिस्तानमा बसिरह्यो त ? यो प्रश्न चाहिँ उठिरहेको छ ।